Play online in Power Ball -ka . Win malaayiin . : PlayLotteryOnline.info 2020
->>> Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan USA Power Ball
Powerball asalkiisu ka soo jeedo dalka Maraykanka , waxaa maamula Ururka Caalamiga ah ee Lotto , kaas oo MUSL . Drawings yihiin Wednesday kasta oo Sabti kasta 22:59 US time Bari , bakhtiyaa Powerball ee bartamaha Maraykanka yihiin at 21:59 . Isku aadka nasiib lambarada Powerball waxa la sameeyey bishii MUSL ee West faro galin , Iowa .
Maxaa la sameeyaa si loo guuleysto ? Way fududahay ! Waxaa ergooyin dooran 5 lambarada soo baxay Lambarada 69 , oo lagu daray hal tiro telefoonno 26 . Tirada dheeraad ah - 1 of 26 - waa PowerBall ka . Kubadaha White waa tirooyin laga bilaabo 1 ilaa 69 , halka kuul oo guduudan yihiin lambarrada laga bilaabo 1da ilaa 26
Raasamaal ugu yar ee Powerball uu yahay ilaa $ 20 million . Raasamaal kasta , haddii ka mid ah hits tirooyinka oo dhan , taas oo sii kordhinaysa by badan $ 5 million . Guuleysto Ball Power waxaa la bixiyo 29 sano ee kolba loo siman yahay . Haddii tirooyinka oo dhan ay si sax ah hal baxay dad tira yar , guul this u qaybsan yahay qaybo siman kuwa dad tiro yar . Raasamaal ugu weyn ee Powerball waxa uu ahaa $ 365 000 000 million . Win qadarka toosaa this taas oo kor u qaybsan yahay ilaa 8 dadka , waxay ahayd 18.02.2006 .
Sidee u ciyaaro Powerball ah?
Waa in aad sameysataa xisaab aad adigu on goobta ku lug iibinta ee rasiidh Powerball . By gujinaya Raayada ku qoran ee soo socda , si fudud oo dhaqso u aad samayn karto .
Markii aad gasho in aad xisaab , dooro lotteries kuwaas oo aad rabto in aad ku ciyaarto iyo saadaaliyo lambarada nasiib .
Dooro taariikhda AGGM aad soo xulay iyo tirada barbaro .
Saxaafadda " Add abuuritaanka " . Oo Faaruq ayaa lagu daray iyo waxaad sii wadi kartaa Sharad tag bixinta .
Marka aad soo xushay shirkadaha ku dhan riix " sii wadaan " .
Kharashka oo Faaruq meeleeyey .
Ka dib bixinta ee aad ka heli doontaa xaqiijin e -mail ah oo ku jira dhirta .